Uchwepheshe we-Semalt: Indlela Yokubhekana Nama-Trouble Analytics Troubles 6
Ukulinganisa amasu okukhangisa okuqukethwe akho okulinganiselwe kubalulekile. Ngaphezu kwalokho, kufanele uhlaziye ukuthi ukubandakanya okuqukethwe kwakho kungukuthi. Ukuhlaziywa kokuzibandakanya kuyinkimbinkimbi kepha enye yezinqubo zamaketha eziphumelela kakhulu.
Ngokusho kochwepheshe ovela ku Semalt , u-Ivan Konovalov, abathengi abaningi banabela isabelomali samasu okuthengisa okuqhubekayo futhi bafuna ukubona imiphumela emihle kakhulu.
Omunye wamaphoyinti abuthakathaka emikhankaso yokukhangisa kokuqukethwe ukuhumusha kwedatha. Lapho abathengi benganaki noma bexoshwa umbiko we-analytics, cishe bazobhekana nezinkinga njengoba kuthinta amasu abo esikhathini esizayo kakhulu - mobile app developers company.
Inkinga # 1: I-traffic ephindayo kakhulu
Uma ubona ukuthi kunomgwaqo omkhulu wokubuya futhi akukho traffic entsha, kuzomele udlulise amasu akho wokumaketha. Abathengisi abahlukahlukene balwela ukuthola ukulinganisela phakathi kokuhamba nokuhamba okusha kwewebhusayithi yabo, kodwa kufanele unqume inani lemibono eyingqayizivele njengoba ukukhula kwendawo yakho kuzoxhomeka kulowo mbono. Imigomo yesayithi lakho kufanele ibe yi-readership ezinikezele, ubuholi obukhulu, nokuzijabulisa. Ngaphezu kwalokho, kufanele uzame ukuthola ithrekhi eningi ngangokunokwenzeka, ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi. Zama ukuguqula izivakashi zibe amakhasimende ajabulisayo.
Inkinga # 2: Abakwa-Spammers kanye ne-bots bangase bathambekele emotweni yakho
Kufanele uhlole i-traffic referral njalo. Kubalulekile ukuphawula ukuthi kukhona ama-bad ama-bots nama-bots amahle. I-bots embi izokhipha idatha yakho ye-analytics. Kunamathuba wokuthi i-spam yofuzo izophazamisa i-akhawunti yakho ye-Google Analytics futhi kuzomele udale izihlungi ukuze uziqede. Ugaxekile we-Ghost alufinyeleli iwebhusayithi yakho..Esikhundleni salokho, ithumela ukubukwa okungalungile, futhi izinga lokunciphisa lingu-100%. Enye yeziphambeko ezivame kakhulu kuvimbela ugaxekile weghost kusuka kumafayela we-.htaccess. Izihlungi zizoqinisekisa ukuthi i-spam yofuzo ayifuni iwebhusayithi yakho esikhathini esizayo.
Inkinga # 3: Ama-dips angacacisiwe ngezinombolo zakho
Uyabona yini ama-dips angacacisiwe ngezinombolo zakho? Ngaphambi kokwesaba ngalesi simo, kufanele uthathe izinyathelo uphinde uhlole umbiko we-Google Analytics ukuthola idatha enembile. Amanye ama-signups kanye nokuvakashelwa kwewebhusayithi yakho kungenzeka ukuba amanga. Ukuze uthole umqondo wokuthi izinombolo zakho ziyashintsha kanjani, kufanele uhlole idatha yenkathi yesikhathi-nesikhathi futhi ubone ukuthi isayithi isendleleni engafanele noma enhle. Qinisekisa ukuthi amasu akho wokumaketha afika emakethe, futhi akukho kugaxekile kwe-bot okubandakanyekayo kuyo.
Inkinga # 4: Izinga eliphezulu lokunciphisa
Izinga eliphakeme lokunciphisa ingenye yezinkinga ezinkulu zokuhweba nabasunguli bewebhu abanamhlanje. Akukahle neze kunoma yiliphi iwebhusayithi, kodwa kuye ngokuthi kungani isayithi lakho lenzelwe, izinga lokunciphisa alikulimazi kakhulu. Qinisekisa ukuthi uthatha amasu okuthengisa okwesikhathi eside, lapho amakhasimende asho konke kuwe. Kufanele usebenzise amasu okunciphisa izinga lakho lokunciphisa. Uma izivakashi zakho zihlasela amanye amakhasi akhethekile kunamanye, ungashiya lawo makhasi kanjalo futhi ushintshe izilungiselelo zokuphumula. Izinga eliphezulu lokunciphisa imiphumela kusuka ezinkingeni ze-UX ngewebhusayithi yakho.
Inkinga # 5: Amakhasi ngeseshini aphansi kunalindelekile
Ukuthutha kwekhwalithi kusayithi lakho kungakwandisa amaholo akho ngesikhathi. Kodwa uma amakhasi akho ngesikhathi ngasinye ephansi kunalindelekile, kufanele uthathe izinyathelo ngokushesha. Kunamathuba wokuthi ukuguqulwa kwakho kuzothinteka. Izinga eliphakeme lamakhasi ngokuvakasha ngalinye kubonisa ukuthi ukubandakanya amakhasi akho kungakanani nokuthi izilaleli zakho zifaka kanjani okuqukethwe kwakho. Isixazululo kuphela sale nkinga sishintsha isihloko kanye nesakhiwo jikelele sewebhusayithi yakho. Kufanele usebenzise izakhiwo ezifanele, izipiramidi zezinhloso ze-SEO kuphela.
Inkinga # 6: Izivakashi azichithi isikhathi esanele kuwebhusayithi yakho
Uma ukhathazekile ngoba izivakashi azichithi isikhathi esiningi kwiwebhusayithi yakho, lokhu kungaba uphawu lokuthi ngabafundi bakho abatholi lutho olubandakanyekayo nolwazi. Lesi yisikhathi lapho kufanele ubheke izithameli zakho emuva kusayithi lakho ngokunikela izaphulelo ezikhethekile ekuthengiseni. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe kwewebhusayithi yakho kufanele kube nokubandakanya nokuwusizo. Hlanganisa izinhlobo ezahlukene zemidiya bese ulayishe amavidiyo, izithombe, kanye nezihloko zekhwalithi kuwebhusayithi yakho ukukhalaza inamba enkulu yabantu.